बिदेशबाट नेपाली ल्याउने तालिका सार्वजनिक कुन देश कहिले ? – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
बिदेशबाट नेपाली ल्याउने तालिका सार्वजनिक कुन देश कहिले ?
प्रकासित : २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार सबै उडान हुँदा करिब ११–१२ हजार नेपालीहरु आउँछन् । यी उडान गरिसकेपछि स्थितिको थप विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय हुन्छ ।
तालिकाबाट के बुझ्नुपर्छ भने विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सरकारले धमाधम उद्धार गर्दै छ ।’